Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ukufungiswa ukuqala umsebenzi kwabasekeli bakamongameli, uRetired General Constantino Chiwenga, esetshiyiswe umsebenzi esisotsheni loMnu. Kembo Mohadi kutshengisa ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa uzaba lobunzima bokuqondisa loba ukukhokhela abebutho embusweni wakhe ngoba belakho ukumtshela ukuthi yibo abenza abekuleso sikhundla.
Eyinye yalezingcwethi ecubungula ezombusazwe, uMnu. Ronald Moyo, uthi uRetired General Chiwenga angabe eseyehliselwe amandla ngokuba lesikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli.
UNkosikazi Similo Maphosa ugcizelele esithi ukungena kuka Chiwenga loMohadi sokuzenza uMnangagwa asebenze ngokwesaba abakwenza uMugabe.
Eyinye njalo ingcwethi ecubungula ezombusazwe, uMnu. Leopold Munhende, uthe abantu kufuze basekele okwenziwa nguMnangagwa ngoba ukwehluleka kwakhe akumelanga kube sobala okokuthi abantu bangaze bathi uyehluleka.
UChiwenga loMohadi bafungiswe ukuqala umsebenzi nguMnangagwa esigodlweni sakhe eseState House ngoLwesine ngemva kokwazisa ukuthi usebakhethile ukuba ngabasekeli bakhe ngeviki ephelileyo.
UChiwenga ngumuntu owesatshwa kakhulu lokuhlonitshwa ngabanye okwamanje eZimbabwe ngoba nguye okhokhele uhlelo lwe Operation Restore Legacy olwenelisa ukukhipha owayengumongameli UMnu. Robert Mugabe embusweni owayeseleminyaka phose engamatshumi amane engumkhokheli efaka uMnangagwa.